Ukuze alawule inani wamanje kanye voltage ngesimiso somshini eyenziwe resistors kwakwakhe ikakhulukazi. izakhi Series axhunywe ukuze kukhawulwe samanje wesifunda, futhi zixhunywe parallel ukudala i voltage iconsi ezengeziwe, kanjalo ezincisha bezikhali umehluko Inani abathengi enisezweni yochungechunge olufanayo.
Ungasebenzisa eyodwa Resistor ukubaluleka oyifunayo, kodwa akunakwenzeka njalo ukwenza izibalo ezidingekayo ukuze abone ukubaluleka elilungile. Ngakho-ke kuhle ukuthi ukhethe ukumelana inhlanganisela sobukhulu ezahlukene.
Uxhumano okucishe kufane nalokhu resistors kwenziwa ngokuxhuma nesiqalo kanye imikhawulo zonke izakhi engeyokuqala olulodwa. Ngakho, isifunda kudalwa lapho Imininingwane voltage iconsi yonkana wesifunda kuye ukubaluleka element ngayinye.
I ukumelana isamba resistors exhunywe parallel, ibalwa ifomula ekhethekile.
Khumbula ukuthi uma wenza ukuxhumana parallel of resistors, ukumelana Imininingwane lwazo zonke izinto nakanjani ibe ncane kune- ukumelana kulencane kufakwe wesifunda.
Nokho, kukhona ezinye izimo ezikhethekile, okuyinto ngeke kulibaleke. Uma wesifunda inikwe amandla resistors ezimbili kuphela, ukumelana yabo Imininingwane ibalwa njengoba umehluko phakathi umkhiqizo wabo kanye sum: Rmain = R1R2 /-R1 + u-R2.
Ikesi ekhethekile eyengeziwe kuyinto ekhuthaza okubaliwe resistors eziningi ezifanayo ukumelana value. Kulokhu, inani kunqunywa njengoba ukubaluleka umehluko enanini lama-elementi ukumelana, okungukuthi: Rmain =-R1 / n.
Kusukela uxhumano okucishe kufane nalokhu resistors - engeyokuqala ezimbili, kuyacaca ukuthi umehluko amakhono abo - ke kuyafana umehluko ezingaba phakathi kwalezi ISIZINDA ezimbili. Ngakho, kunengqondo ukuphetha ngokuthi voltage ngasinye izakhi bayalingana. Kubonakala sengathi lokhu: U = U1 + U2 + U3 + ... + Un ..
Uma bobabili ISIZINDA ukwakha uxhumano okucishe kufane nalokhu resistors is ezixhunywe ngokuqondile terminals umthombo wamandla, voltage ngayinye resistances kuyoba ulingana voltage yakha umthombo uqobo: U1 + U2 + U3 + ... + Un = U ..
Esinye isici zezakhi of resistors uxhumano parallel wesifunda kuyinto kagesi. It is basakaza ngokusebenzisa amagatsha reverse wakhona ukumelana kulezi zifunda. Ngamanye amazwi, lo mkhulu ekumelaneni wamanje ombalwa, Ngakolunye uhlangothi, ayanda zamanje, ephansi ukumelana. Lona ngumthetho Ohm lokuqala: I = U / R.
Lamanje Imininingwane e engeyokuqala kuyinto yesamba samanani zamanje egatsheni ngalinye ngokuhlukile. Phela, amacala ayikwazi buthelela ISIZINDA, ngakho-ke kufanele kuqashelwe lokuqala umthetho Kirchhoff sika, othi: ". Isamba imisinga, okuyinto afakiwe engeyokuqala ilingana isamba imisinga ukuthi baphume kulo ' Singasho kulula - isamba imisinga at a engeyokuqala zero. Futhi inkulumo ebhaliwe simi ngale ndlela: "Isibalo imisinga ilingana no-zero."
Kwethulwa nazi imithetho ehambisana circuit ngaphandle inductance kanye capacitance. Uma uxhumano okucishe kufane nalokhu resistors yiyona wesifunda efanayo ikhoyili noma capacitor, kubalulekile ukuthola umbono ka impedance tonkhe tincenye. Ukuze wenze lokhu, ukubala inductance kanye capacitance.